ပါးလေးကို သွယ်သွားစေမယ့် contouring ကို ဘယ်လို လွယ်လွယ်လိမ်းကြမလဲ? | CosmeticMyanmar
Home » Article » ပါးလေးကို သွယ်သွားစေမယ့် contouring ကို ဘယ်လို လွယ်လွယ်လိမ်းကြမလဲ?
ပါးလေးကို သွယ်သွားစေမယ့် contouring ကို ဘယ်လို လွယ်လွယ်လိမ်းကြမလဲ?
ပါးရိုးလေးတွေသွယ်ဖို့ ပါးဖောင်းနေတာတွေပျောက်သလို ထင်ရတဲ့ မိတ်ကပ်နဲ့လုပ်လို့ရတာကို ဘယ်လိုခေါ်သလဲသိလား? အချစ်တို့။ ဟုတ်ပါတယ် contouring လို့ခေါ်တဲ့ မျက်နှာက shade တွေကို ပိုပေါ်လွင်အောင် လုပ်လိုက်တာမျိုးပါ။ လင်းတဲ့နေရာတွေလင်းအောင် ညိုသင့်တဲ့နေရာလေးတွေကို shade ချလိုက်တာပေါ့နော်။ သြော်မင်မင်ရယ်ပြောတော့လွယ်တာပေါ့။ လိုက်လုပ်ရင်သာခက်တာ။ ဟုတ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးအများစု မလုပ်တတ်ဆုံးက အလှပြင်ရာမှာ အခက်ဆုံးအပိုင်းလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်နော်။ စိတ်မပူပါနဲ့တော့။ အလွယ်ဆုံးနည်းလေးတွေနဲ့ အလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်တတ်ဖို့ နည်းလမ်းလေးကို ပေးမလို့ပါနော်။
အခုနည်းလမ်းက beginners တွေအတွက်ဆိုတော့ တကယ့်ကို ရိုးရိုးစင်းစင်းလေးပဲပေးမှာနော်။
-Contouring brush တစ်ချောင်း
အဲ့နှစ်ခုပဲလိုအပ်ပါတယ်။ လိုအပ်တာလေးကတော့နည်းပေမယ့် သေချာမရွေးချယ်ရင်တော့ လွဲနေဦးမှာပါပဲနော်။
အရင်ဆုံး bronzer ရွေးကြမယ်။ Bronzer ကို အမှားများကြတာတစ်ခုကတော့ အရောင်ရွေးချယ်တာပါ။ Contouring ဆိုတော့ အရောင်ကိုအရင့်ဆုံး အနက်ဆုံးတွေရွေးကြတာပါ။ အဲ့လိုအရောင်မျိုးတွေက ကျွမ်းကျင်တဲ့သူလေးတွေအတွက်ကတော့ အေးဆေးဖြစ်ပေမယ့် အခုမှစတင်မယ့်သူတွေအတွက်ကတော့ ခက်မှာပါ။ အမည်းရာအကြောင်းလိုက်ကြီးတွေဖြစ်နေတာတို့, ကြေးတွေတက်နေသလိုဖြစ်နေတာမျိုးတွေကြောင့်လက်လျှော့လိုက်ရတဲ့သူတွေလည်း မနည်းပါဘူးနော်။ ဒါတွေကအစဆို ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတတ်လို့စိတ်မပူပါနဲ့နော်။
ဘယ်ဘက်ကအရောင်ရင့်တာမျိုးကို ရှောင်ပြီး❌❌ ညာဘက်ကလိုမျိုးအရောင်လေးတွေကို ရွေးပေးရမှာပါ။✔️✔️
အဲ့တော့ ပေါင်ဒါအမှုန့်အမျိုးအစားကိုရွေးပါ။ အရောင်က အသားရောင်ထက်တစ်ဆင့်လောက်ပဲ ရင့်တာလေးကိုရွေးပေးပါ။ အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါပြီ။ ပထမအဆင့်တော့ပြီးသွားပြီ။
ကဲနောက်တစ်ဆင့် brush ရွေးရမှာပါ။ Brush မှာတော့ တစ်စောင်းလေးဖြစ်နေတာ, angled brush လိုပုံစံမျိုးလေးကိုရွေးပေးရမှာပါနော်။ brush က အမွှေးပွပွကြီးတွေထက် ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ဖြစ်တာလေးကိုရွေးပေးရမှာပါ။ ဒါမှလိုချင်တဲ့ direction အတိုင်း သွားနိုင်ပြီး ထိရောက်စွာ ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။
ကဲ စပြီ။ contouring time!
-အရင်ဆုံး foundation , powder တွေအကုန်လိမ်းပြီးတော့မှ စတင်တာအကောင်းဆုံးပါ။ အရင်ဆုံး နှုတ်ခမ်းကိုစူတဲ့ ပုံစံလုပ်လိုက်ပြီး ချိုင့်သွားတဲ့ပါးနေရာကို လိမ်းပေးရမှာပါ။ ပြီးရင် brush နဲ့ bronzer ကိုယူလိုက်ပြီးတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ခါပေးလိုက်ပါ။ ဒါမှအမှုန့်တွေက တစ်နေရာတည်းမှာစုမနေဘဲဖြစ်မှာပါ။ လက်ရဲ့ direction ကိုအပေါ်အောက် သွားပေးပါ။ Direction တစ်ခုတည်းကိုသွားရင် အကြောင်းလိုက်ရာကြီးထင်နေပြီး သိသာစေလို့ပါ။
-ပြီးရင် နဖူးကျယ်တဲ့သူတွေကတော့ ဆံပင်ပေါက်တဲ့နေရာ ဆံစပ်နားလေးတွေကို လိမ်းပေးရမှာပါ။ ဒါလေးကတော့ powder လိမ်းစလိုပဲလိမ်းပေးရမှာပါ။ အရမ်းမခက်ပါဘူးနော်။
-နောက်ဆုံးနေရာလေးကတော့ မေးရိုးတစ်လျှောက်ပါ။ မေးရိုးကို နှစ်ဖက်စလုံးကို brush နဲ့ လိမ်းပေးရမှာပါ။ သူကတော့ လွယ်ပါတယ်။ powder လိမ်းသလိုမျိုးလေးလိမ်းပေးရမှာဖြစ်လို့ သိပ်မခက်ဘူးထင်ပါတယ်နော်။
အောက်မှာ video လေးထည့်ပေးထားသေးတယ်နော်။ အချစ်တို့ကိုပိုလှစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပုံမှန်လေးစွဲသုံးပေးရင် အသားရေလေးဖြူဖွေးလာစေမယ့် ပစ္စည်းလေးနှစ်ခု
နုထွေးရွှန်းစိုတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတစ်စုံအတွက် lip balm ကောင်းကောင်းလေး